Inkampi-Imizuzu engama-20 ukuya eBerkshire East!
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguHarold
Yonwabela ukuthula okuzolileyo, amahlathi abucala, izilwanyana zasendle, kunye nesibhakabhaka esingalibalekiyo sobusuku obuneenkwenkwezi kweli khaya lihle. Yimizuzu eyi-8 kuphela ukuya kwilali yaseCharlemont kunye ne-5 ukuya kwiTannery Falls yokungena kwihlathi laseSavoy State.
Ngexesha lokubaleka kwakho entabeni qiniseka ukuba ukuhambo lwemizuzu engama-30 kuphela ukuya eNorths Adams, Adams, Cheshire, Greenfield, Ashfield, okanye Goshen.
Gxininisa utyelelo lwakho ngohambo oluya eBerkshire East Ski Resort, Zoar Outdoor, MASS MoCA, okanye iClark Art Museum.
Yeyakho yonke into ukuba uyonwabele! Le yindlu yokuma yodwa . Niya kuba nendlwana yendlu kunye nomhlaba ovulekileyo kuni. Le yindlu yokuma yodwa engqongwe ngamakhulu eehektare zomhlaba onamahlathi aphantsi kolawulo kwaye iya kuba yeyakho yonke ukuyiphonononga!
4.97 · Izimvo eziyi-100
Ngokubukeka okumangalisayo kunye nevenkile yelizwe ekwimizuzu eli-15 kude nedolophu yaseCharlemont. I-Savoy yindawo efanelekileyo kwaye intle yokumisa kwi-Mohawk Trail. Amacandelo ehlathi leMohawk State abekwe eSavoy kunye neSavoy State Forest. Ukukhempisha, ukukhwela intaba, ukuloba, ukukhwela ikhephu kunye nokunqumla ilizwe lokutyibilika ekhempini yiyo yonke imisebenzi ekhoyo eSavoy.
Umbuki zindwendwe ngu- Harold
I’m retired and enjoy outdoor activities
Sinobubele kakhulu kodwa siyayihlonipha imfihlo yakho. Zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi nangaliphi na ixesha (umnxeba, umbhalo, okanye i-imeyile). Kwakhona siyavuya ukudibana nawe ngokobuqu ukuba ungathanda.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Savoy